Sukuhlawulela iikopi eziphindiweyo zeMeyile | Martech Zone
Musa ukuhlawula iikopi eziphindwe kabini zemeyile
NgoLwesibini, Juni 25, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uninzi lwenu luyazi ukuba ndivela ngqo kwimvelaphi yeposi. Ngelixa i-imeyile ethe ngqo ingqineke ibiza kakhulu ngokubuyisa okunciphisiweyo xa kuthelekiswa nentengiso ekwi-Intanethi, iseyindlela efanelekileyo. Sibona amaxabiso amahle okubuyisa kwishishini le-B2B-elishiye ubukhulu becala i-imeyile ethe ngqo. I-imeyile ethe ngqo enxulumene nabathengi isengumzi mveliso omkhulu, nangona kunjalo.
Namhlanje, ndifumene ezi ziqwenga zintathu zifanayo kwibhokisi yam yeposi ibhekiswe kwidilesi efanayo. Yiphakheji entle esongiweyo eyilwe kakuhle ngabantu baseVictoria Secret. Uhlobo lolutsha, iPinki, luthandwa kakhulu ngabafazi abancinci kwaye intombi yam ikuluhlu lwabo lokuposa. Ngelishwa leVictoria Secret, nangona kunjalo, inkqubo yabo ye-imeyile ethe ngqo ayenzi msebenzi ulungileyo ekunciphiseni iphulo. Sifumene iziqwenga ezi-3 kwidilesi efanayo. Amabini abhekiswe kumagama ahlukeneyo entombi yam kwaye elinye lalibhekiswe kum… andinalwazi lokuba kutheni.
Le mpazamo iyabiza. Isiseko sedatha esisetyenziselwe la maphulo sinokuqhutywa ngokulula kwisoftware eya kuqinisekisa ukuba isiqwenga sithunyelwa kumntu omnye kuphela kwidilesi. Ukongeza, inokudityaniswa nedatha yesini ukundisusa ngokupheleleyo ekuthumeleni.
Ukuba ucwangcisa umkhankaso weposi othe ngqo, gcinani engqondweni ukuba yeyona nto ibalulekileyo kwezinye iiarhente ukugcina ivolumu inyukile. Ngelishwa, oko kuqhuba imbuyekezo yakho kutyalo-mali kunye namazinga okuphendula ngokungekho mthethweni. Yintoni enokuba ngumkhankaso omkhulu apha unokuxelwa njengongakhange usebenze kakuhle. Qinisekisa ukuba isiseko sedatha siyaphindaphindwa ngaphambi kokuba uthumele kwaye ubuze iarhente yakho ukuba bakulungele na ukubuyisa nayiphi na impinda okanye iziqwenga ezibuyisiweyo.
tags: ukukhuphelaileta ngqopinkImfihlo yeVictoria
Ngubani ojonga kwiintengiso zeBanner
Juni 25, 2013 ngo-11: 42 AM
Oku kunokuba yindleko ngokukodwa kumthengisi othile-bahlala bethumela amakhuphoni kwiimveliso zasimahla ngeposi. Endaweni yento enye nje, njengoko kufanelekile, intombi yakho inokuqokelela kwizinto ezintathu zasimahla ngenxa yempazamo yabo. Kulungile kuye - kubi kumgca wabo ongezantsi. (Pun ungajonganga ngenjongo kodwa ushiyele iigiggles.)